Fahasalamàna · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamàna · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Fahasalamàna tamin'ny Oktobra, 2018
Eoropa Afovoany & Atsinanana 17 Oktobra 2018
Tamin'ny Oktobra farany 2008, nanoratra mikasika ny fiezahany hampianatra vondrona manampahefana tao amin'ny polisy ao Kyiv momba ny fandaharanasa mikasika ny fampihenana ny vokadratsy ny Okrainiana iray blaogera. Na toa tsy dia liana aza tamin'ity fomba fijery mbola-tsy-malaza mikasika ny fandraisana an-tànana ny zava-mahadomelina ity na tamin'ny fahazoany kapaoty maimaim-poana avy tamin'ireo mpikatroka aza ireo polisy nihaino ilay famelabelaran-kevitra, raha tarafina amin''ity lahatsoratra fanarahana (teny Rosiàna) nosoratan'i mazay ity, nisy vokany tsara ihany ilay resaka nony farany.
Afrika Mainty 17 Oktobra 2018
Aretina mandripaka maneran-tany izay namotika ny fiainan'ny lehilahy, vehivavy ary zaza maro nandritra ny 20 taona mahery ny VIH/SIDA. Anndroany, mitondra lahatsary ho anao izahay, izay miresaka momba ny VIH/SIDA amin'ny endriny maro samihafa: ahoana no hiainana izany, hiarovana ny tenanao tsy ho tratrany ary ahoana no hanentanana momba izany. Avy any Kamerona, hira nahazo loka voalohany tamin'ny resaka SIDA, avy any Arzantina, hetsi-panentanana izay tsy matahotra ny milaza amin'ny tanora ny atao hoe kapaoty sy ny fomba fampiasana azy, ary avy any Beijing, lahatsary mikasika ny fanavakavahana, miaina miaraka amin'ny SIDA ary ny tanjaka hahatonga ilay toedraharaha ho an'ny besinimaro.
Toa tapitra ny fahavaratra any Koety satria mivoaka amin'ny hakamoany ny tontolon'ny blaogy ao amin'ny firenena. Amin'ity herinandro ity, resahan'ireo biloagerantsika ny mikasika ny fanakanana iray hafa ao amin'ny firenena, ny fividianana DVD tsy ara-dalàna, gazetiboky vaovao ho an'ireo Filipiana any Koety ary andro iray nahafinaritra tany amin'ny... toerana iray famokarana sarimihetsika.